Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Thalassemia (1) (သာလာဆီးမီးယား) သွေးအားနည်းရောဂါ (၁)
Thalassemia (1) (သာလာဆီးမီးယား) သွေးအားနည်းရောဂါ (၁)
ဆရာရှင့် ကျေးဇူးပြုပြီး Thalassemia အကြောင်းကို သိချင်လို့ပါ။
Anemia သွေးအားနည်းရောဂါ အမျိုးမျိုးထဲက တမျိုးဖြစ်တယ်။ နာမည် အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Mediterranean Anemia နဲ့ Homozygous Beta Thalassemia ခေါ်တယ်။ မျိုးဗီဇလိုက်တယ်။ အောက်စီဂျင်ကို သုံးပေးတဲ့ သွေးနီဥထဲက Hemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင်) ထုတ်လုပ်တာမှာ ပြဿနာရှိတာ ဖြစ်တယ်။ သွေး နီရတာက သူရှိလို့ဖြစ်တော့ သူနည်းရင် ဖြူဖျော့နေမယ်။ (ဟီမိုဂလိုဘင်) ဆိုတာ သံဓါတ်နဲ့ လုပ်ထားတယ်။ ဒီရောဂါရှိနေသူမှာ (ဟီမိုဂလိုဘင်) က ပြိုကွဲလွယ်နေလို့ သက်တမ်းမကုန်ခင် ပျက်စီးနေကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မလုံလောက်တော့ဘဲ၊ သွေးအား နည်းလာတယ်။
1. Thalassemia trait အမျိုးက သူကိုယ်တိုင် ရောဂါမပြပေမဲ့ သူ့မျိုးဆက်ကို သယ်ဆောင်ပေးနေတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ဖြစ်ရင်လဲ သွေးအားနည်းတာ နဲနဲလောက်သာ ဖြစ်မယ်။ Hemoglobin A2 ဆိုတာတွေ ပိုများနေမယ်။
2. Thalassemia major က (မေဂျာ) ဆိုတာနဲ့အညီ ဆိုးတယ်။ မွေးမွေးချင်း ကောင်းပေမဲ့ ၃ လ နဲ့ ၈ လ အကြား ရောဂါပြမယ်။ ဖြူဖတ်ဖြူရော် ဖြစ်လာမယ်။ သိပ်မအိပ်ဘူး။ နို့စို့ နည်းမယ်။ အန်တာ ပိုမယ်။ မကုဘဲ ထားရင် ၈ နှစ်သား အထိသာ အသက်ရှင်မယ်။ ဖြူရော်တာအပြင် ခေါင်းကိုက်မယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ အသက်ရှူ မဝဘူး၊ Jaundice အသားဝါ ဖြစ်လာမယ်၊ Spleen ဘေလုံးကြီးလာမယ်။ မျက်နှာရိုး ပုံမှန်မဟုတ်၊ ကြီးထွားမှု နှေးမယ်။
Alpha (အာလ်ဖါ) နဲ့ Beta (ဘီတာ) ဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲထားတယ်။ Alpha က အာဖရိကားတိုက်နဲ့ အမေရိကားမှာတွေ့ရမယ်။ အရှေ့တောင် အာရှ၊ တရုတ်မှာလဲ ရှိတယ်။ Beta အမျိုးက မြေထဲပင်လယ်ဒေသက ဂရိ၊ တူရကီ၊ ဆစ်စလီကျွန်း၊ အီတလီ တောင်ပိုင်း၊ ကော်စီကာ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ မောလ်တာ၊ နိုင်ငံ-ဒေသတွေမှာ များတယ်။ တရုတ်၊ တောင်အာရှ ဒေသတွေမှာလဲ ရှိတယ်။
တကမ္ဘာလုံးမှာ Beta thalassemia trait ရှိနေသူပေါင်း သန်း ၆ဝ ကနေ ၈ဝ အထိရှိမယ်။ စာရင်း အတိအကျ ကောက်ရင် ပိုများနိုင်တယ်။ Beta thalassemia major ကို Cooley's anemia ခေါ်သေးတယ်။
သွေးစစ်တာနဲ့ ရောဂါ ရှိ-မရှိသိတယ်။ သွေးနီဥတွေဟာ သေးနေမယ်။ နည်းနေမယ်။ ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းနေမယ်။ တခြား သွေးအားနည်းရောဂါ Sickle-cell anemia နဲ့ မတူဘူး။ Thalassemia က အရည်အတွက်နဲ့ Sickle-cell anemia (ဆစ်ကယ်လ်-ဆဲလ်) သွေးအားနည်းရောဂါက အရည်အသွေးဆိုပြီး မတူကြတာပါ။ တခါတလေ ထပ်နေတတ်တယ်။
• Thalassemia trait ရှိနေသူကို ကုသပေးစရာ မလိုပါ။ အလွန်ဆုံး သံဓါတ်ဆေးသာ သောက်ခိုင်းမယ်။
• Thalassemia major ရှိနေသူတွေကို သွေးသွင်းပေးနေရတယ်။ တလတခါ ဆိုသလို သွင်းနေရတတ်တယ်။
• Desferal ဆေးထိုးပြီး သွေးထဲမှာ ပိုနေတဲ့သံဓါတ်တွေကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်။
• လိုအပ်ရင် Splenectomy ဘေလုံး ခွဲထုတ်ပေးမယ်။
• Beta thalassemia ရောဂါရှိသူတွေကို Iron chelation ဆေးပေးတယ်။ Deferoxamine ကို အကြေားဆေး၊ ဒါမှမဟုတ် အရေပြားအောက် ထိုးပေးရတယ်။ အမေရိကားမှာ Deferasirox စားဆေးနဲ့ ဥရောပမှာ Deferoprone စားဆေးသုံးတယ်။
• သွေးသွင်းနေရရင် သံဓါတ်ဆေး မသောက်ရပါ။
• Bone marrow transplant ကို ကလေးတွေမှာ လုပ်ပေးတယ်။
သေဆုံးရတဲ့ အကြောင်းက Heart failure နှလုံး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာ ဖြစ်တယ်။ အသဲလဲ ထိခိုက်မယ်။ ရောဂါပိုး ဝင်လွယ်မယ်။ အသက် ၂ဝ နဲ့ ၃ဝ ကြား ဖြစ်တတ်တယ်။ သိပ်မဆိုးသူတွေမှာ အသက် ပိုရှည်ပါတယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ Alpha thalassemia major ရှိသူကနေ Stillbirth ကလေးအသေ မွေးနိုင်တယ်။
ဆိုးတဲ့ထဲမှာ ကောင်းတာလေးတွေ ရှိသေးတယ်။ ငှက်ဖျားထူရာတွေမှာ တွေ့တတ်ပြီး၊ ငှက်ဖျားကို ပိုပြီးခံနိုင်ရည် ရှိကြတယ်။ β thalassemia ကိုသယ်ဆောင်နေသူတွေဟာ Coronary heart disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ဖြစ်တာ နည်းတယ်။
ကာကွယ်ဘို့ကတော့ လက်မထပ်ခင် Genetic counseling မျိုးဗီဇ နဲ့ Prenatal screening ဆေးစစ်မှုတွေ လုပ်ရပါမယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ နှလုံးသားအပြင်၊ ဆရာဝန်ကိုလဲ အကူအညီ တောင်းပါ။